Programme PROSPERERKaoperative KFSM sy SCRIMAD: mahatsara ny fihariana atao ny fahaizana mifanerasera amin’ny olona rehetra - Programme PROSPERER Kaoperative KFSM sy SCRIMAD: mahatsara ny fihariana atao ny fahaizana mifanerasera amin’ny olona rehetra - Programme PROSPERER
Mividy voankazo ary mitondra izany ao Antananarivo no asa nataon’i Ramatoa Rafanomezantsoa Fidélice ny taona 2007. Taty aoriana lasa mpamokatra letisia, garana, mananasy ary corossol, sns izy ankehitriny ao anatin’ny Kaoperativa KFSM na Kaoperativa Firaisankina Sahavalaina Miray ao amin’ny Fokontany Sahavalaina, Kaominina Ambinaninony, Distrikan’i Brickaville. Ho tantarainy amintsika ato amin’ity lahatsoratra ity ny dingana narahany ka nahatonga ny fahombiazany ankehitriny.
«Nandalo teto ny SCRIMAD ary niresaka taminay izy fa mitady mpamokatra letisia. 10 izahay no nivory ary nikambana hamaly ilay tinady. Niverina izy ary nilaza fa tokony hikambana ho fikambanana izahay satria tsy afaka miara-miasa aminy raha tsy efa fikambanana. Dia natsangana ny fikambanana ary namatsy letsia ny SCRIMAD izahay 10 mianadahy. Iray taonina sy sasany no nanombohana ny fiaraha-miasa ary iny no notsinjarainay mpikambana. Nitombo ho 3 taonina taty aoriana ary nitombo hatrany. Maherin’ny 800 fototra ny letisianay mpikambana 10 mianadahy ireo. Izany hoe mbola afaka mamaly tsena betsaka ankoatry ny an’ny SCRIMAD.
Tsy dia nahazatra anay ny nivarotra tamin’ny Orinasa lehibe tamin’izany fotoana izany satria vao nanavao kanefa nitondra tombony betsaka ho anay. Nandefa ny vokatra amin’ireny fiara lehibe mpitondra vokatra ireny no fanaonay mantsy hatrizay. Manana mananasy izahay eto Sahavalaina, efa nisy ihany koa fikambanana tamin’ny fotoanan’ny PPRR nifototra tamin’ny fambolena garana. Mba ahafahanay mamoaka ny vokatra dia nanatona azy indray izahay ny taona 2014. Tonga nijery taty ifotony izy ary nampanantena fa hitady tsena ho anay. Herintaona taty aoriana, izany hoe ny taona 2015, nanatona anay indray izy ary nilaza handray ny mananasy vokarinay kanefa tsy maintsy ampitomboina ihany koa ny fambolena atao. Novatsiana masomboly ny mpikambana ary nomena ihany koa fahalala ara-teknika amin’ny fambolena mananasy. Nifanarahana taminy fa izahay mpamokatra tsirairay tokony hanana mananasy 1.500 fototra aby farafahakeliny, dia samy niezaka nampitombo ny fambolena. Ny ahy manokana izao efa tafakatra 8.500 fototra ny mananasiko.
Tsy ho vitan’ny SCRIMAD anefa ny hanara-maso akaiky ny famokaranay ka nitady fiaraha-miasa tamin’ny Fandaharanasa FANOITRA izy ny taona 2017 mba hijery ifotony sy hampiofana ara-teknika, ny kolontsaina fandraharahana, ny fananganana drafitr’asa, ny fitantanana ho anay mpikambana.
Ankoatra ny Fandaharanasa FANOITRA, nisy koa ny Tetikasa FARARANO, niara-niasa taminay tamin’ny fananganana ny Kaoperativa KFSM na ny Kaoperativa Firaisan-kiana Sahavalaina Miray ny volana septambra 2017. Mbola 10 mianadahy ny mpikambana: 4 vavy ary 6 lahy. Ny sehatrasa momba ny famokarana voankazo no iasan’ny kaoperativa ary ny letisia, mananasy ary ny garana no vokarina amin’izany.
Taorian’ny fiofanana sy ny tsena efa nandeha, ho ahy manokana dia nialako ny fanaterana vokatra tany Antananarivo : ny vidin’entana ambany, ny saram-pivezivezena anefa etsy an-daniny ambony, izaho reraka. Hany nataoko, namorona tsena amoron-dalana ka izay vokatra rehetra tsy alain’ny SCRIMAD dia namidiko tao avokoa. Tsy ny vokatro irery no amidy eo fa samy manatitra eo izahay mpikambana rehetra ny maraina ary raisina an-tsoratra tsara, ny hariva vao mizara ireo vidin’entan’ny tsirairay arakaraky ny vokatra lafo.
Amin’izao fotoana izao, samy miezaka izahay manatsara ny vokatray mba hamaliana sy hitazomana ireo mpandray ny vokatray. Manomboka volana jolay teo, efa nanomboka izahay mampiasa ny zezika tanimainty amin’ireo letisia efa voarantsana mba hanatsara ny vokatra sy hampitombo ny habean’ny voana letisia (calibre) ho 36 milimetatra.
Ho an’ny mananasy, tafakatra 6 taonina ny vokatra noraisin’ny SCRIMAD raha toa ka maherin’io ny vokatra miakatra ny taona 2018, ny garana 7 taonina ary ny letisia 20 taonina raha toa ka tafakatra 30 taonina ny vokatra miakatra ho an’ny KFSM.
Hitako tena nahasoa ahy ny fiofanana azoko toy ny fitantanana. Vao mahazo vola vidin ‘ny vokatra taloha na mitondra vola ramose, dia vidiana daholo izao rehetra izao avy eo na vary ohanina aza trosaina amin’ny mpivarotra. Rehefa mahalafo vokatra avy eo dia efaina indray aloha ilay trosa. Vao nanomboka ny fiaraha-miasa tamin’ny SCRIMAD sy ny Fandaharanasa FANOITRA ary ny Tetikasa FARARANO dia nitombo ny fahaiza-manao, hay ny nitantana na ny fotoana na ny vola na ny asa, hay ny namokatra ary hay ny nifanerasera tamin’ireo mpandray vokatra. Tsy ananako olana ankehitriny ny fianaran’ny zanako, ny vola miodina ampiasaina isan’andro ao antrano,…
Ny asa tena tahaka izao tsy maintsy andalovana olana. Ny taona 2018 teo, mananasy 500 fototra no potiky ny rivo-doza: nihintsana ny mananasy efa lehibe ary tapitra lo avokoa. Ankoatry ny loza voajanahary, ny voalavo koa no mandripaka eto. Efa nahazo fiofanana zahay famonoana voalavo fa ny ataoko amin’izao lomana rano ny sakay dia afafifafy amin’ny fototra mananasy dia nihena ny fanimban’ny voalavo ny mananasy hatreto.
Tsy voatery ho volabe kajiako isan’andro no tombontsoako fa eo ihany koa ny fahalalana be dia be noraisiko ka ahafahako mitondra ny sehatrasa fihariako, ny fahafahako mampiana-janaka sy mividy tany, manatsara ny ao an-tokatrano amin’ny fividianana fitaovana toy ny fahitalavitra, fanatsarana ny trano,… Trano falafa mitafo falafa ny tranoko teo aloha, vao nisy fiaraha-miasa tamin’ireo voalaza ireo dia navadikay mivady ho trano mitafo fanitso ny trano. Vinako izany amin’izao ny hanangana trano vato ato ho ato mba hanatsara hatrany ny toeram-ponenana.
Betsaka ireo fiofanana efa azonay mpikambana ary isaoranay ny Fandaharanasa FANOITRA sy ny SCRIMAD tamin’izany, ny fanirianay anefa ny hahazo fiofanana momba ny fanamainana voankazo. Raha toa ka misy fahatapahany na fihatoana eo amin’ny fandraisana ny vokatray dia tsy ho sahirana izahay fa azonay atao ny manodina ny vokatra.»
Aujourd'hui : 11 vues | Cette semaine : 1183 vues | Total : 6476 vues